Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo ka hadlay Xildhibaanada yimid magaalada Cadaado – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaGudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo ka hadlay Xildhibaanada yimid magaalada Cadaado
Hiiraan Xog, Sep 30, 2017:- Guddoomiyaha Baarlamaanka maamulka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa beeniyay wararka sheegaya in dowladda Federaalka ay ku lug leedahay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya Mas’uuliyiinta Maamulka Galmudug, isagoo eedeyn u jeediyay Xildhibaanadii labada Aqal ka socday ee waan waanta u tagay magaalada Cadaado.
Mr Cali Gacal ayaa sheegay in Xildhibaanadii ka socday Baarlamaanka aysan marnaba ka run sheegin xaqiiqda khilaafka iyo halka uu asalkiisa ka yimid, waxaana uu tilmaamay inuu u arkay in aysan dhex dhexaad ka aheyn wada hadalka.
“Anaga markii aan is aragnay waxaa u sheegnay qodobada la isku hayao ee markii hore khilaafka keenay, waxay noo sheegeen in aysan arrintaas u imaan, laakiin ay doonayaan oo kale in dhinacyada iska soo horjeeda ay isu keenaan”ayuu yiri Guddoomiye Cali Gacal Casir.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Xildhibaanada aysan ka hadlin go’aanka Madaxweyne Xaaf ka qaatay khilaafka Khaliijka, xanibaadii lagu sameeyay iyo xil ka qaadista Xildhibaanada ay ku sameeyeen, taasoo uu xusay inay aheyd wax meesha ku jiray oo aanay soo hadal qaadin.
Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Madaxweyne kuxigeenka oo labadaba isku aragti ka ah ayaa shuruudo adag hor-dhigay Xildhibaanada iyo Madaxweyne Xaaf, waxaana ay marka hore ka dalbadeen inuu ka laabto go’aankii uu ka qaatay Khilaafka Khaliijka, inuu raalli gelin ka bixiyo, iyo in wafdi wasiiro ah oo ka socda Xukuumadda iyo Xildhibaano lagu xanibay Muqdisho lagu soo biiriyo wada hadalka.
Hadalkan ka soo yeeray Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug ayaa xaalada uga sii daraya khilaafka ka taagan Galmudug, kaasoo aan illaa iyo hada wax xal ah laga gaarin, waxaana Xildhibaanadii tagay Cadaado ay sheegeen inuu guuldareystay waan waantii ay labada dhinac ka dhex wadeen.